Bixinta Caalamiga ah! Soo qaado Samsung Galaxy Note 8 oo bilaash ah | Androidsis
Bixinta Caalamiga ah! Soo qaado Samsung Galaxy Note 8 oo bilaash ah
Jose Alfocea | | Dood-wadaag
Waxaan bilaabeynaa usbuucaan cusub dhiirigelin iyo rajo wanaagsan oo ay mudan tahay tan awgeedna, wax kafiican ma ahan inaad kaqeyb qaadan karto qoob ka ciyaarka cajiibka ah iyo inaad fursad u leedahay gebi ahaanba kaa qaado Guushii ugu dambeysay ee ka soo gaarta South Korea Samsung, Galaxy Note 8.
Haddii aad la dhacsanayd xarunta cusub laakiin aad u malaynaysay inaadan haysan ilaa ay hoos ugu dhacdo qiimaha, waad khaldantay. Hadda waxaad fursad u leedahay inaad midkood ku guuleysato bilaash. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo helo Galaxy Note 8 oo bilaash ah, waa inaad sii wadataa akhriska.
Sida toddobaad kasta, wiilasha Hay'adda Android waxay durbaba bilaabeen daabacaad cusub oo ah wax bixintooda taas oo isticmaaleyaasha adduunka oo idil way ka qaybqaadan karaan oo hel wadar bilaash ah casriga casriga ah ee Android.
Markan maxaad awoodaa Ku guuleysiga waa Samsung Galaxy Note 8 cusub mahadsanid iskaashiga dheeriga ah ee Zizo Wireless, oo ah shirkad ku takhasusay qalabyada taleefankaaga casriga ah, laga bilaabo kiisaska, guryaha ama shaashadda ilaaliyayaasha, kuwa ku hadla Bluetooth ama usha selfie wanaagsan
Si aad u hesho cutub ka mid ah muuqaalkan quruxda badan gebi ahaanba bilaashka ah, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad booqato daabacaadda isku aadka raacna tilmaamaha lagu tilmaamay. Asal ahaan waxay ku saabsan tahay wadaagista qoob-ka-ciyaarkan shabakadaha bulshada si loo helo kaqeybgal. Tallaabo kasta oo cusub waa fursad cusub oo lagu guuleysto ee ha moogaan midkoodna.
Ha iloobin taas kaliya hal gelitaan ayaa loo oggol yahay qofkiiba Sidaa darteed, ha u isticmaalin cinwaanno emayl badan si aad u hesho fursado badan maadaama, haddii aad guuleysato, abaalmarinta ay kaa dhammaato.
Isticmaalayaasha ka socda meel kasta oo adduunka ah ayaa ka qaybqaadan kara, haddii ay dhacdo in Samsung Galaxy Note 8 cusub aan loo diri karin goobta aad u socoto, waxaa lagu siin doonaa kaarka hadiyadda ee qiimaha u dhigma.
Ha iloobin akhri shuruudaha ee isku aadka iyo GUUL !!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » Bixinta Caalamiga ah! Soo qaado Samsung Galaxy Note 8 oo bilaash ah
Carli lahaa dijo
Tani waa mid ka mid ah quruxda samsung ..
Taasi waxay la dhacday tayada sawirada, nooca androi, kaamirooyinkeeda ...
Telefoon aad u fiican.
Ku jawaab Carli tena
Wuu ka qayb galay!
Jawaab Hugo Bustamante T
Waxaan kaqeyb galayaa Hadiyadan Weyn Nasiib Wanaag Dhamaan!
Wuu ka qayb galay
Rene De Jesus Munoz dijo
Tag isaga soo hel !!!
Jawaab René De Jesus Muñoz
Homer Pajin Molina dijo
Telefoonka super ayaa i xiiseeya, waxaan rabaa inaan kaqeyb galo, nasiib wacan dhamaan ...
Jawaab Homero Pajin Molina
ka qayb galay
Ku jawaab BM
Guul B Rs dijo
Durba waxaan kujiraa walaac si aan u ogaado cida guuleysan doonta
Jawaab Victoria B Rs
Sergio Maskaxda dijo
Jawaab Sergio Maskaxda
Jawaab Arie Kembario
Motorola waxay kaloo diyaarsataa taleefankeeda casriga ah oo wata Android saafi ah
Sebtember: Dagaalkii cusbaa ee adduunka casriga ah